bradu na brads brads na udiri nke igwe site na oke uda brazing
Induction brauma ọla na ụdọ ọla na ibe iji dochie ọwa ọkụ. Usoro ọgbụgba dị ugbu a na-ebute mmerụ oke n'ime ọgbakọ a, ma chọọ nrụzigharị mgbe ọrụ bra bra gasịrị.
DW-UHF-40KW igwe eji eme ihe na - emegharị ọnụ ugboro ugboro
Ike: 30 kW
Oge: Nkezi oge - 25 sekọnd
Maka brauzed ọla kọpa ọla na mkpanaka ọla kọpa,, EZ Flo 45 brase brabasị n'ime 2 ”ogologo ma tinye ya na mpaghara interface. N'ime ọnọdụ mmepụta, a na-atụ aro mkpụrụ osisi EZ Flo 45 brazing. E hibere nzukọ ndị a (lee foto) ma kpo oku ka ọ bụrụ oge dị ka 25s na-aga were were wee mee ihe emem.
N'ihi ihe mgbochi nke igwe dị n’etiti ọla kọpa na ọla, ihe mgbochi nke ọla nchara dị ọkacha mma. Ihe mkpuchi iji mee bras ahụ na ngalaba efere ahụ na-aghọrọ mkpanaka ahụ ma na-ebugharị okpomọkụ ahụ na efere ahụ karịa n ’ime ya na-eme ka ogwe ndị ahụ nwee ike iru okpomọkụ tupu eburu efere ahụ. Ọ bụrụ na ihe ndị ahụ bụ otu (na - ejikọta ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa na ọla, nke a abụghị nsogbu. Ọ bụrụ na ihe mgbochi bụ ọla kọpa ma efere ahụ bụ ọla kọpa enweghị nsogbu - naanị mgbe ụlọ mmanya ahụ bụ ọla na efere dị ọla kọpa. Nke a chọrọ. ike a ga - ewelata iji nye ohere maka mbufe ọkụ site na mkpanaka ọla rue efere ọla kọpa.
Ike nkwonkwo siri ike
Categories Technologies Tags brazing, ọla nchara, eji ọla kọpa, ọla kọpa na ọla, Ejiri ọla kọpa dị elu, ume nkwado, brazing brass brave, na-eme ka brads ọla kọpa Mail igodo
Brauze brauze brauze emechara eme ya
Igwe anaghị ekwe nchara igwe anaghị agba nchara